Winii Maadikizela Maandeellaa: Gaggeesituu farra Appaartaayidi waggaa 81'tti boqotan - BBC News Afaan Oromoo
Winii Maadikizela Maandeellaa: Gaggeesituu farra Appaartaayidi waggaa 81'tti boqotan
Gaggeessituu farra appaartaayidii fi haadha warraa Nelsan Maandellaa duraanii kan turte Wiinii Maadikizelaa Maandellaa waggaa 81 boqatan.
Iseefi abbaan warraasheeduraa Nelsaan Maandeellaa, kan waliin mana hiidhaa turan lamaan isaaniyyuu, waggota 30f biyyaattiif mallattoo qabsoo farraa appaartaayidii turan.
Haa ta'u malee, gara boodaaa keessa maqaanshee gama siyaasaafi seeraatiin jalaa badee ture.
Akkuma oduun boqachuu ishee dhagahameen, garee gadditootaa fi qondaltoonni siyaasaa mana jireenyaa shee isa Johaansbargi Sowettootti argamutti yaa'aa turan.
Dubbi himaan maatii Viktor Dlaamiin dukkubbii dheeraan booda ''aaddee Maandeellaan maatiifi warra jaalataniin marfamanii bakka jiranitti Wiixata ganama 'nagaadhaan boqachusaanii gara sa'aa boodaa'' ibsaniiru. Dhukkubbiin kunis akka yeroo baay'e hospitaala galuun bahan taasisee ture.
Addee Maadikizela Maandeellaa bara 1936 baha Keeptaahun lafa Traansketti dhalatan.
Bara 1950tti yoo abbaa warraashee gara fuula duraatiin wal agartuutti hojattuu hawaasum leenjirtu turte. Achinis ijoollee dubaraa lama waliin godhatanii ture.
Waggoota soddomaaf sababii Mr Maaldeellaan mana hidhaa turaniif addaan fagaatani jiraatan illeen walumaagalatti waggoota 38f gaa'ilaan jiraataniiru.
Erga Maandellaan umurii gutuuf hidhamanii boodas oggansa qabsoo fudhachuun diddaa apaartaayidiitiis idil addunyaarratti mallattoo kan turte ishaadha. Haqaafi walqixxumaaf qabsaa'usheetiif isheenis hidhamte turte.
Deeggartoota isheetiifis akka 'haadha biyyaa' ta'un beekamti turte.
Eenyutuu kabaja kenneefi?
Pirezidaantiin Siriil Raamaafozaa kan Winii Maandellaan jalaqaba bara kanaa galateeffattee turte hasawaa tvn taasisaniin, sagalee qabsooftuu bulchitoota warra adii lakkoofsaan gadaanoo irratti jechuun waameera.
Aaddee Maadikizelaa Maandeellaa mana murtii alatti guyyaa abbaan warraa ishee umurii gutuun itti murtaa'eetti.
Paartiin Afriikaa Kibbaa ANC'n Siiriil Raamaafosaa akka ogganaatti muude
Ajjeechaa Gammachiis Moosisaan shakkamuun misirroo dabalatee namoonni jaha to'annoo jala oolan
Daqiiqaa 34 dura
Samantaa Paawor daawwannaa Itoophiyaatti taasifteen waa'ee biyyattii maal jette?
Itoophiyaan caalbaasii hayyama tajaajila Itiyoo-telekoom lammaffaa baasuuf
Bakakkaan keessummoota cidharra turan 17 ajjeese
'Ajjeechaa Gammachiis Moosisaan shakkamuun misirroo dabalatee namoonni jaha to'annoo jala oolan
Ameerikaafi Sudaan dhimma Itoophiyaarratti maal mari'atan?
'Nuti Lixa Tigraay lafa jedhamu hin qabanne' - Naannoo Amaaraa
Paarkii Inxooxxoo hanga daandii Jibuutiitti dhaabbata pirojektii gurguddoo ijaaru